बधाई ! अमेरिका उच्च अध्ययन गर्न आएकी नेपाली चेली नौसेनाकी क’मान्डर पदमा ब’ढुवा ! - Thulo khabar
बधाई ! अमेरिका उच्च अध्ययन गर्न आएकी नेपाली चेली नौसेनाकी क’मान्डर पदमा ब’ढुवा !
न्यु योर्क : अमेरिका उच्च अध्ययन गर्न आएकी काठमाडौँ महाराजगंजकी नेपाली चेली जतन केसी बास्तोला नौसेनाकी क’मान्डर पदमा ब’ढुवा भएकी छिन । अमेरिकामा आई ज’लसेनाको उक्त पदमा पुग्ने नेपाली छोरी केसी बास्तोला
सम्भवत पहिलो नेपाली हुन् । अहिले सम्म कै जानकारी र सोध खोज अनुसार बास्तोला अमेरिकी सेना तथा नौसेना मै क’मान्डर पद अर्थात् उक्त दर्जामा पुग्ने पहिलो नेपाली हुने अवसर पाएकी छिन । त्यसमा पनि नेपाली महिला ।उनको पदोन्नति गत सेप्टेम्बर १ ,२०२१ देखि भएको हो ।
अहिले सम्म उनले ३ वटा जहाजहरुमा काम गरि सकेकी छिन भने तिनीहरुमा युएसएस चेफी,युएसएस हेरी एस ट्रुम्यान रहेका छन् ।
हाल उनि युएसएस वास्पमा सहायक आपूर्ति अधिकारीको रुपमा कार्यरत छिन् ।उनको अन्य मुख्य काम भनेको वित्तीय तथा लजिस्टिक (संभारिकी) आपूर्ति गर्नु लगायत पर्दछ । उनि सन् २००६ देखि नौसेनामा भर्ना भएकी हुन् ।